Oko kwathethi, kukho iqhinga elibi eliqala ukuvela kwi-intanethi elitya ixesha lam kwimiyalezo ethe ngqo kunye nemiyalezo ejolise kuyo. Iinkampani zipapasha izicelo ezenzelwe wena njengam apha ngezantsi ukuze ndiphendule okanye ndibelane nabaphulaphuli bam. Andiqinisekanga nokuba zizenzekelayo okanye zenziwe ngesandla, kodwa ziyacaphukisa- kwaye ndiyabazisa.
Nanku omnye umzekelo apha ngezantsi. Ndikwafumana itoni kwezi kwiinkampani ezahlukeneyo ngomyalezo othe ngqo kunye ne-imeyile ngokunjalo. Ndilisusile igama le-arhente kuba zihlala zifikelela kumxholo obalaseleyo ofanelekileyo kubaphulaphuli bethu. Le tweet ingezantsi; nangona kunjalo, ayisiyiyo enye yale miyalezo. Bendingancokoli malunga ne-Snapchat, khange ndicele ngcebiso nakubani na malunga ne-Snapchat, kwaye andikhathali nge-Snapchat's inqaku lakutshanje.
Esi sisilumkiso esenzelwe wena kunye ngqo nesithathileyo esithathe ingqalelo yam kude komnye umsebenzi. Imimango ye-imeyile yinto enye, ndiza kuzijonga ngexesha lam kwaye ndiphendule okanye ndicime njengoko kufanelekile. Nalu ulinganiso (lokwenene):
Imeko A: Ndihleli edesikeni yam ndisebenza, kwaye inqaku le-imeyile elininzi liyangena. Kunye nesandi kweminye imiyalezo evela kubaxhasi kunye nethemba. Akukho namnye wabathumeli abalindeleyo ukuba ndiphendule ngokukhawuleza, nangona. Xa ndifumana ithuba lokujonga i-imeyile, ndiyazijonga kwaye ndiphendule ngokufanelekileyo.
Ukuba ucinga ukuba esi sisicwangciso sentengiso esinefuthe elifanelekileyo-ukufikelela ngaphandle kunye nokuphazamisa kum yonke imini-uyaphosisa. Nceda ulihloniphe ixesha lam. Ukuba uza kufikelela kum buqu kwimithombo yeendaba, yenze xa ndivula umnyango wale ncoko. Ngaphandle koko, papasha umyalezo wakho njengesiqhelo- ngaphandle kokundimaka.